Iindaba - Emva koqhanqalazo lobuhlanga, imifanekiso eqingqiweyo yaphoswa e-US
Emva koqhanqalazo lobuhlanga, imifanekiso eqingqiweyo yaphoswa e-US
Kuyo yonke i-United States, imifanekiso eqingqiweyo yeenkokheli ze-Confederate kunye namanye amanani embali anxulumene nobukhoboka kunye nokubulawa kwabantu baseMelika bayachithwa, bahlanjululwa, batshatyalaliswa, bafuduswa okanye basuswa emva koqhanqalazo olunxulumene nokufa kukaGeorge Floyd, umntu omnyama, emapoliseni Ukugcinwa ngoMeyi 25 eMinneapolis.
ENew York, iMyuziyam yaseMelika yeMbali yezeNdalo ibhengeze ngeCawa ukuba izakususa umfanekiso oqingqiweyo kaTheodore Roosevelt, umongameli wase-US wama-26, ngaphandle komnyango omkhulu. Umfanekiso oqingqiweyo ubonisa uRoosevelt ekhwele ihashe, ejikelezwe ngumMerika waseMerika kunye noMdabu waseMelika ngeenyawo. Imyuziyam ayikatsho ukuba izakwenzani ngomfanekiso oqingqiweyo.
E-Houston, imifanekiso eqingqiweyo emibini kwiipaki zikawonkewonke isusiwe. Omnye wale mifanekiso iqingqiweyo, uMoya we-Confederacy, umfanekiso oqingqiweyo wobhedu omele ingelosi ephethe ikrele kunye negatsha lesundu, wayemi eSam Houston Park iminyaka engaphezulu kwe-100 kwaye ngoku ukwindlu yokugcina izinto zedolophu.
Isixeko silungiselele ukuhambisa umfanekiso oqingqiweyo kwiMyuziyam yaseHouston yeNkcubeko yase-Afrika yaseMelika.
Ngelixa abanye bafuna kwaye bathathe inyathelo lokulahla imifanekiso eqingqiweyo ye-Confederate, abanye bayabakhusela.
E-Richmond, eVirginia, umfanekiso oqingqiweyo we-Confederate jikelele uRobert E. Lee uye waba liziko lengxabano. Abaqhankqalazi bafuna lo mfanekiso ususwe, kwaye iRhuluneli yaseVirginia u-Ralph Northam wakhupha i-odolo yokuba isuswe.
Nangona kunjalo, lo myalelo uvaliwe njengeqela labanini bepropathi bafaka isimangalo kwinkundla yomanyano besithi ukususwa komfanekiso kuya kunciphisa iipropathi ezingqongileyo.
Umgwebi wase-Federal u-Bradley Cavedo ugwebe kwiveki ephelileyo ukuba lo mfanekiso uyipropathi yabantu ngokubhekisele kwitayitile yesakhiwo ukusukela ngo-1890. Wakhupha isigunyaziso esathintela urhulumente ukuba angasihlisi phambi kokuba kwenziwe isigqibo sokugqibela.
Uphononongo olwenziwe ngo-2016 liZiko lezoMthetho leNdlala eseMazantsi, umbutho ongajonganga nzuzo, wafumanisa ukuba zingaphezulu kwe-1,500 iisimboli zikawonke-wonke ze-Confederate kwi-US ngohlobo lwemifanekiso eqingqiweyo, iiflegi, iipleyiti zikarhulumente, amagama ezikolo, izitalato, iipaki, iiholide kunye neziseko zomkhosi, ubukhulu becala zigxile eMzantsi.
Inani lemifanekiso eqingqiweyo kunye nezikhumbuzo ngelo xesha zazingaphezulu kwama-700.
Umbutho weSizwe woPhuculo lwaBantu abaBala, umbutho wamalungelo oluntu, ubize ukuba kususwe iisimboli ze-Confederate kwiindawo zikawonke-wonke nakurhulumente iminyaka. Nangona kunjalo, kukho iimbono ezahlukeneyo ngendlela yokujongana nezinto zakudala eziyimbali.
"Iyandikhathaza le nto ngenxa yokuba le yimbonakalo yembali yethu, oku kukumelwa kwento ebesicinga ukuba ilungile," utshilo uTony Brown, unjingalwazi omnyama kwezentlalo kunye nomlawuli weQela loQeqesho lobuhlanga nobuhlanga kwiYunivesithi iRis. Kwangelo xesha, sinokuba nenxeba eluntwini, kwaye asicingi ukuba kulungile kwaye singathanda ukususa imifanekiso. "
Ekugqibeleni, uBrown wathi angathanda ukubona imifanekiso eqingqiweyo ihleli.
“Sikholisa ukufuna ukuyenza mhlophe imbali yethu. Sivame ukufuna ukuthi ubuhlanga abuyonxalenye yokuba singobani, asiyonxalenye yezakhiwo zethu, asiyonxalenye yexabiso lethu. Ke, xa ususa umfanekiso oqingqiweyo, ucoce imbali yethu, kwaye ukusukela ngalo mzuzu uye phambili, kuye kubenze ukuba abo bahambisa umfanekiso bave ngathi benze ngokwaneleyo, ”utshilo.
Ukungazenzi izinto zihambe kodwa ukwenza izinto zibonakale ngomxholo yile ndlela ubenza ngayo abantu baqonde ukuba ubuhlanga bungene nzulu kangakanani, utshilo uBrown.
Imali yelizwe lethu yenziwa ngomqhaphu, kwaye yonke imali yethu iprintwe ngamadoda amhlophe, kwaye abanye babo babenamakhoboka. Xa ubonisa olo hlobo lobungqina, uthi, linda umzuzu, sihlawula izinto ngomqhaphu oprintwe nabanini bamakhoboka. Uyabona ke ukuba ubuhlanga bungene nzulu, utshilo.
UJames Douglas, uprofesa wezomthetho e-Texas Southern University kunye nomongameli wesahluko se-Houston se-NAACP, angathanda ukubona imifanekiso eqingqiweyo ye-Confederate isuswa.
“Azinanto yakwenza nemfazwe yamakhaya. Imifanekiso eqingqiweyo yakhelwe ukuhlonipha amajoni e-Confederate kunye nokwazisa ama-Afrika aseMelika ukuba abantu abamhlophe baphethe. Babemiswe ngenjongo yokubonisa amandla abantu abamhlophe ababenawo kubantu base-Afrika baseMelika, ”utshilo.
UDouglas ukwangumgxeki kwisigqibo sikaHouston sokuhambisa uMoya woMfanekiso wobumbano kumyuziyam.
“Lo mfanekiso ngowokuhlonipha amaqhawe awayesilwela amalungelo ombuso, ubukhulu becala abo babesilwela ukugcina ama-Afrika aseMelika engamakhoboka. Ngaba ucinga ukuba ukhona umntu onokucebisa ukuba kubekwe umfanekiso oqingqiweyo kwiMyuziyam yoBugebenga eyathi lo mfanekiso wenziwe ngembeko yabantu ababulala amaJuda kwigumbi legesi? ” Ubuze.
Imizobo kunye nezikhumbuzo zezokuhlonipha abantu, utshilo uDouglas. Ukuzibeka nje kwimyuziyam yase-Afrika akuyithathi inyani yokuba imifanekiso eqingqiweyo iyabahlonela.
KuBrown, ukushiya imifanekiso eqingqiweyo endaweni ayimhloniphi loo mntu.
Kum, oko kubonisa iziko. Xa unomfanekiso oqingqiweyo, awuthethi nto malunga nalo mntu. Ithi into malunga nobunkokeli. Kuthetha into ngaye wonke umntu otyikitye kunye naloo mfanekiso, wonke umntu owathi lo mfanekiso ulapho. Andiqondi ukuba ufuna ukuyicima loo mbali, ”utshilo.
UBrown uthe abantu kufuneka bachithe ixesha elininzi becinga ukuba kwenzeka njani ukuba "sithathe isigqibo sokuba lawo ngamagorha wethu ukuqala ngawo, sijonga indlela esigqibe ngayo ukuba le mifanekiso ilungile".
Ukunyakaza kweMicimbi yoBomi obuMnyama kunyanzelisa iMelika ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iqhubeke.
I-HBO isuse okwethutyana ifilimu ye-1939 ihambile nomoya kwiminikelo yayo ekwi-intanethi kwiveki ephelileyo kwaye iceba ukuphinda ibuyise ifilimu yakudala ngengxoxo yemeko yayo yezembali. Ifilimu igxekiwe ngokuzukisa ubukhoboka.
Kwiveki ephelileyo, iQuaker Oats Co ibhengeze ukuba isusa umfanekiso womfazi omnyama ekupakisheni isiraphu yakhe yeminyaka eyi-130 kunye nomxube wepancake u-Aunt Jemima nokutshintsha igama layo. IMars Inc ilandele ngokususa umfanekiso womntu omnyama ekupakisheni irayisi yakhe ethandwayo kaMalume uBen kwaye wathi izakuyinika elinye igama.
Ezi mveliso zimbini zagxekwa ngenxa yemifanekiso yazo engacacanga kunye nokusetyenziswa kwezihlonipho ezibonisa ixesha apho abelungu abamhlophe basebenzisa “umakazi” okanye “umalume” kuba bengafuni ukubiza abantu abamnyama ngokuthi “Mnu” okanye “Nkskz”.
Bobabini uBrown noDouglas bafumanisa ukuba intshukumo ye-HBO ilumkile, kodwa bajonga ukuhamba kwemibutho yokutya eyahlukileyo.
“Yinto elungileyo ukuyenza,” utshilo uDouglas. “Sinamashishini amakhulu ukuze siqonde ubugwenxa beendlela zabo. Ba (besithi), 'Sifuna ukutshintsha kuba siyaqonda ukuba lo ngumboniso ombi wama-Afrika aseMelika.' Bayayiqonda ngoku kwaye bayayisusa. ”
KuBrown, intshukumo yenye yeendlela zemibutho ethengisa iimveliso ezingaphezulu.
Abaqhankqalazi bazama ukudiliza umfanekiso oqingqiweyo ka-Andrew Jackson, owayesakuba ngumongameli wase-US, eLafayette Park phambi kwe-White House ngexesha loqhankqalazo lokungalingani ngokobuhlanga eWashington, DC, ngoMvulo. JOSHUA ROBERTS / REUTERS
Ixesha Post: Jul-25-2020